Nidaamka shucaaca laser ee maqaarka | LIFE PICKER - 2018
Nidaamka shucaaca laser ee maqaarka
Farsamooyinka qalabka isticmaalaya tamarta iftiinka ayaa si adag u gashay warshadaha qurxinta. Waxaa loo isticmaalaa in ay dib u soo kabtaan maqaarka wejiga iyo jirkaba, timaha aan loo baahnayn, iyo xallinta dhibaatooyinka gaarka ah - suufka, rosacea, burooyinka cirridka ah ama dhadhanka oo keena raaxo nafsaani ah oo aad ku ridi karto inaad ka takhalusto. Gaaban, lasers waxaa loo isticmaalaa meel kasta. Waanu fahmi doonaa sida ay u shaqeeyaan.
Ereyga "laser" laftiisu waa soo gaabinta asalka asalka, taas oo macnaheedu yahay "dheellitir yar iftiinka shucaaca". Qalabka ugu horreeya ee noocan oo kale ah waxay u muuqdeen kuwo dhowaan dhow, ee 60s ee qarnigii la soo dhaafay. Innovator, waa markii ugu horeysay ee dunida lagu horumariyo laser shaqeeya, wuxuu ahaa Physicalist Theodore Meiman. Wixii helitaankiisa, wuxuu helay abaalmarin badan, kadibna xitaa xitaa shirkad u furay qalabka laser, Korad Corporation. Marka laysku daro, laserka kowaad wuxuu ahaa mid adag-xoqan.
Sikastaba ha ahaatee, fekerka sawir-qaadista sawir-qaadaha, oo hoosta ka xariiqay hababka nidaamka laysarka, ayaa si buuxda loo asaasay ka dib - ka dib dhammaan 20 sano ka dib helitaanka Mr. Meiman: 1983, waxaa lagu sharxay laguna daabacay joornaalka sayniska ee laba cilmi-baarayaal Maraykan ah, Rox Anderson iyo John Parrish. Waxay ogaadeen in shucaaca iftiinka uu saameeyn ku yeelan karo calaamadaha maqaarka. First of all, waxay ka hadlaysaa melanin - pigment masuul ka ah midabka maqaarka, iyo oxyhemoglobin - pigment ee dhiig ee dyes cas.
Collagen, oo sidoo kale ka mid ah chromophores, wuxuu ahaa mid yar oo xiiso leh saynisyahanno, tan iyo markii ay ahayd si siman awood u leh inuu nalalka iftiinka wabi ah kasta. Melanin iyo oxyhemoglobin waa kuwo aad u doorbid badan - mid kasta oo ka mid ah waxay ka nuugaan iftiinka kaliya ee kala duwan iyo qoto dheer. Marka la eego, soo saarayaasha qalabyada mustaqbalka waxay bilaabeen inay soo saaraan aalado gaar ah oo kala duwan - iyo laser laser removal, for maqaarka dhalinyarada, iwm.
Shucaac kasta wuxuu leeyahay saddex siyood oo aasaasi ah: isku xirnaanta, iskuduwaha iyo isu-ururinta.
Isku xirnaansho macnaheedu waa in geeddi-socodka ugu sarraysa iyo hirarka mawjadaha iftiinka ay yihiin kuwo is barbardhigaya, iyo wejigooduna waxay ku dhacaan meel bannaan iyo waqti. Hal-ku-soo-shub ayaa tilmaamaya in hirarka oo dhan laser uu sameeyo, uu yeesho dalool isku mid ah isla markaana aan isbeddelin. Dhiibashadu waa shaacbixinta shucaaca, taas oo ay ugu wacan tahay tamarta jirku uu ku gaadho unugyada iyada oo aan lumin.
Inta badan shucaaca laser waxaa loo isticmaalaa in lagu saameeyo maqaarka dadka - waxaa ku yaala inta badan dhibaatooyinka heesaha ee qofku soo baxo. Iftiinkuna wuxuu u galaa dermis kaliya si qotodheer qoto dheer, waa kala firdhaan wuxuuna nuugay jajabyo. Waqtigan xaadirka ah, dhammaan tamarta sawirrada ayaa loo wareejiyaa unugta bartilmaameedka ah waxayna u beddelaysaa kuleylka. Qiyaasta 5-10% ee shucaaca ayaa ka muuqda lakabka sare ee maqaarka.
Cilmi-baadhayaashu waxay sida caadiga ah u kala qaybiyaan dhammaan falaqaynta laser-ga ableynta - ka saarista aag gaar ah oo ah unug nool, iyo saameyn xaddidan, oo keena waxyeelo u geysanaysa aagagga qalloocsan iyada oo aan waxyeello lakabka sare ee maqaarka. Ablation waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro unugyada, tusaale ahaan, si loo soo saaro burooyinka ama in lakabiyo maqaarka si ay dib ugu noolaadaan ama xitaa dib u dhigto gargaarka. Soo saarista xulashada waxaa loo adeegsadaa in la iftiimiyo meelaha ay ku jiraan hyperpigmentation, ka saarista tattoos, marinnada dhiigga, timaha aan loo baahneyn.